KMF/Cnoe : “Mila avahina mazava ny fivavahana sy ny politika” | NewsMada
KMF/Cnoe : “Mila avahina mazava ny fivavahana sy ny politika”
“Fanjakana laïka isika: tokony hiavaka tsara ny fitondrana sy ny fiangonana, na ny politika sy ny fivavahana. Mila mandray andraikitra ireo mirotsaka ho kandidà. Tokony handray andraikitra mifanandrify amin’izay koa ny fiangonana, fa tsy mamela ny mpanao politika amin’izany.”
Izay ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Rabekijana Félix, momba ny fampifangaroana ny raharaham-pivavahana sy ny politika tato ho ato. Tokony handray fepetra hentitra ny mpitondra fivavahana mba tsy hifangaroan’ny raharaham-politika sy ny fivavahana.
“Anjaran’ny mpitondra fivavahana ny mandray fepetra hoe aleo tsy hifangaro ny politika sy ny fivavahana, fa manjary manakorontana ny sain’ny kristianina. Anjaran’ny kristianina koa ny mahatsiaro tena”, hoy izy. Any am-piangonana ve no manao kabary politika? Saika hararaotin’ny mpanao politika isehoana avokoa izao na fihaonana ara-pivavahana, na loza, na hetsika hafa…
Tsy mbola misy lalàna ny fotoana mialoha ny fampielezan-kevitra
“Tsy mbola misy ny lalàna momba ny fotoana mialoha ny fampielezan-kevitra eto Madagasikara”, hoy ihany izy. Hatramin’izao, tsy fantatra marina izay ho lalàm-pifidianana. Efa nandalo ambaratonga maro izy io. Tsy mbola mivoaka izay fanatsarana ny lalàm-pifidianana izay. Rahoviana?
Ny misy amin’izao fotoana izao: samy miezaka mandresy lahatra izay mieritreritra hirotsaka ho filohan’ny Repoblika, mitaontaona ny olona. Tsy misy kandidà azo ekena, raha tsy efa misy fihaikana mpifidy ataon’ny fanjakana, misokatra ny fisoratana anarana ho kandidà, mivoaka ny kandidà ofisialy. Tsy mbola fantatra koa ny rotsa-bola amin’ny firotsahan-kofidina.
Tokony hazava ao anatin’ny lalàm-pifidianana ny momba ny hoe fotoana mialoha ny fampielezan-kevitra. Hisorohana ny fanaovana fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana izany.
Mahazo tombondahiny ny mpitondra fanjakana
Manome tombondahiny izay eo amin’ny fitondrana ny fotoana mialoha ny fampielezan-kevitra noho ny fampiasany fahefam-panjakana amin’ny fitokanana zava-bita, ohatra. Ny manahirana: tsy misy olona hilaza mivantana hoe: “Fidio aho“. Nefa mamofompofona fitaomana olona amin’ny fifidianana na ny fihetsika na ny fiteny, nefa volam-panjakana no ampiasaina.